CIYAARAHA – Radio Damal
30ka Ciyaartoy Ee Lagu Daray Buugga Dhacdooyinka Adduunka Ee Guinness World Records & Waxyaabaha Ay Ku Mutaysteen
Mid ka mid ah Shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub oo la soo af jaray
Ra’iisal-wasaaraha dalka Faransiiska ee Édouard Philippe ayaa ku dhowaaqay in guud ahaan dhacdooyinka ciyaaraha noocyadooda kala duwan laga joojiyay maanta oo Talaado ah illaa laga gaaro bisha September, xitaa garoomo xiran aanan lagu ciyaari doonin.
Xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus ayaa sabab u noqday in ciyaaraha dunida oo dhan hakad la galiyo 12-kii Maarso, waxaana hubanti ahayn xilliga ay dunida ka bixi doonto xaaladda cabsida ah ee uu sababay xanuunkan.
Dalka Faraniiska ayaa dalalka Netherlands, Belgium iyo Argentina kula biiray waddamada joojiyay kubadda cagta xilli ciyaareedkan, maadaama aysan soo laaban karin inta lagu gudo jiro xagaaga.
“Xilli ciyaareedka 2019-20 ma sii socon karo,” ayuu yiri Ra’iisal-wasaaraha dalkaas galabta.
“Ma qabsoomi doonaan dhacdooyinka waaweyn ee ciyaaraha, gaar ahaan kubadda cagta, ka hor bisha September, xitaa albaabo xiran laguma ciyaari doono” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Waxaa la eegi doonaa saameynta uu go’aanka mudane Philippe ku yeellan doono kooxaha illaa hadda ciyaaraya tartanka Champions League, tusaale ahaan kooxda Olympique Lyonnais oo lugta labaad ee wareegga 16-ka la ballansan tartanka horyaalla Yurub.
Lyon ayaa lugtii hore ku adkaatay 1-0 kulankii Faransiiska ka dhacay, waxaana safarkoodii Turin uu baaqday kaddib markii Daniele Rugani uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Serie A oo coronavirus laga helay.
Illaa iyo hadda lama xaqiijin in horyaalka ay kooxi qaadi doonto, kooxna ay laaban doonto ama kooxo qaar ay tartamada Yurub iska soo xaadiriyaan.
“Waxaan u qalmay inaan garaaco Maxamed Saalax” – Kevin De Bruyne
Kubad sameeyaha kooxda Manchester City iyo xulka qaranka Belgium ee Kevin De Bruyne ayaa ka hadlay guuldarradii ka soo gaartay abaal-marinta ciyaaryahanka sannadka ee horyaalka Premier League, kaddib markii uu kaga guuleystay Maxamed Saalax labo sano kahor.
Maxamed Saalax ayaa ku guuleystay abaal-marinta Premier League ee ciyaaryahanka ugu fiican xilli ciyaareedkii 2017/18, kaddib markii uu dhaliyay 32 gool isla markaana uu ka caawiyay saaxiibadiis 11 gool kale, inkastoo Kevin De Bruyne iyo kooxda Manchester City ay xilli ciyaareedkaas ku guuleysteen koobka horyaalka.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Kevin De Bruyne, waxaana uu yiri:
“Ma aqaan sida ay cod bixiyayaashu uga fekerayaan kubadda cagta, mana aqaano waxa ay ku xisaabtamayaan inta ay codeynayaan, laakiin waxaan u maleynayaa inaan ku guuleysan lahaa abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican Premier League labo sano ka hor”.
“Laakiin waan fahmi karaa sababta uu Saalax ugu guuleystay, malaha sanadkaan waxaan fursad u heystaa inaan ku guuleysto, ma aqaano, waxaan u maleynayaa inaan heysto fursad fiican laakiin waxaa jira ciyaartoy kale oo soo bandhigay qaab ciyaareed fiican”.
Rio Ferdinand oo sheegay inuusan wali cafin John Terry kaddib falkii uu kula kacay walaalkiis 10 sano kahor
Halyeeyga kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa xaqiijiyay in uusan wali cafin John Terry, kaddib markii uu falkii isir-fuquuqa ahaa kula kacay walaalkiis Anton Ferdinand.
Warbixin lagu daabacay wargeyska “Daily Star” ee dalka England ayaa lagu sheegay in FA-ga uu John Terry ku helay dambi ah midab takoor ka dhan ah walaalka la dhashay Rio Ferdinand ee Anton Ferdinand, inta lagu gudi jiray kulan dhex maray kooxaha Chelsea iyo QPR, sanadkii 2011.
Halyeyga kooxda Chelsea ee John Terry ayaa kaddib dhacdadaas lagu ganaaxay inuu maqnaado afar kulan iyo bixinta lacago dhan 220 kun oo Pound.
Rio Ferdinand ayaa wuxuu qiray inuu wali ka soo horjeedo John Terry, kaasoo hadda ah kaaliyaha tababaraha Aston Villa, inkastoo in ka badan toban sano ay ka soo wareegatay markii ay dhacdadaas dhacday.
Haddaba Rio Ferdinand ayaa wareysi uu bixiyay waxaa soo xigtay wargeyska “Daily Star” ee dalka England, waxaana uu yiri:
“Haddii aan awoodi lahaa inaan saacadda dib u soo celiyo, waxaan ka hadli lahaa wixii dhacay maalinta koowaad, waxaana u sheegi lahaa walaalkay inuu hadlo”.
“Waxaan helnay talo, waa inaad xasuusnaato inay jiraan wakiilo sharci ee kooxda, horyaalka iyo FA-ga ah, dadkan kala duwan waxay u hadlaan waxa anaga inoo wanaagsan”.
Ciyaaraha Olombikada ee Tokyo oo la qorsheynayo in gabi ahaanba la kansalo haddii…
Sida warbixinnadu ay tilmaamayaan Ciyaraha Olombikada ee Tokyo ayaa la qorsheyanayaa in la kansalo haddii faafaha COVID-19 uu sii socdo ilaa sanadka soo aaddan.
Haddii dhibaatada coronavirus-ka adduunka aan la xakameyn sanadka dambe, Ciyaaraha Tokyo ee 2020 oo horey loo qorsheeyay bisha July ee 2021-ka waa la kansali doonaa, sida uu wareysi ku sheegay Madaxweynaha guddiga qaban-qaabada.
Isagoo la hadlayey Wargeyska maalinlaha reer Japan ee Nikkan Sports, Madaxweynaha qabanqaabada Yoshiro Mori wuxuu meesha ka saaray suurtagalnimada in 2020 Olombikada dib loo dhigo wixii ka dambeeya 2021-ka.
“Haddii Covid-19 uu wali khatar ku sii yahay adduunka sanadka soo socda, Ciyaaraha Olombikada ma dhici doonaan gabi ahaanba.” ayuu yiri Yoshiro Mori.
Xiddiga khadka dhexe ee reer Spain, Dani Ceballos ayaa shaaca ka qaaday in ciyaartoyda Arsenal ay la haayeen astaamaha calaamadaha caabuqa coronavirus kaddib markii cudurkan laga helay Macallin Mikel Arteta, laakiin aan laga baarin.
Arteta ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee ku sugan Premier League ee laga helay cudurkan bishii Maarso, waxaana la hakiyey ciyaarista kubadda cagta tan iyo markaas.
Dhammaan kooxda koowaad ee Arsenal ayaa markii dambe la karantiilay labo toddobaad, laakiin Ceballos oo lahadlayay Movistar ayaa haatan shaaca ka qaaday in ciyaartoy dhowr ah ay sidoo kale la heeyeen astaamaha caabuqan.
“Waxaan soo toosay subaxnimadii oo waxaan arkay Mikel Arteta oo baarintaan lagu sameeyey isla markaana laga helay,” ayuu yiri Ceballos.
“Kooxda waa la karantiilay, waxaa jiray ciyaartoy leh astaamaha caabuqan, laakiin dhammaanteen waan fiicannahay, iyaguna nama aysan baarin.”
“Waxaan ku dadaalaa sida ugu fiican ee aan karayo, way adag tahay in qoyska laga fogaado, halkan [England] waxaad ku socon kartaa dariiqa si sahlan oo aad u tagi kartaa Jimicsi maalintiiba.”